न्युयोर्क शहरमा टोपी लाएर हिंडदा जुनसुकै जात, धर्म र सम्प्रदायका नेपालीहरुले पनि तपाईं नेपाली हो ? कहिले आउनु भयो ? भनि सोध्ने गर्दछन् । यो कर्मभूमीमा पनि नेपालीहरुले टोपीलाई देखेर अपनत्वपन देखाउँदा मन सारै...
एमालेमा यसो गरे कसो होला ?
एमाले महाधिवेसन सकिए पनि चुनावले सिर्जना गरेको अंकगणितीय धंगधंगीको मैजारु भएकोे छैन । त्यसमा पनि कुरोको चुरो बनेको छ, बहुपदीय पदमा मर्यादाक्रम तोक्ने र पदाधिकारीमा पराजित तर सदस्यमा जितेर आएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने...
राष्ट्रिय चलचित्र नीति कस्तो बनाउने ?
नेपाली चलचित्रलाई राष्ट्रिय नीति चाहियो भनेको त धेरै भयो । तर, यसमाथि आवश्यक गृहकार्य गर्न थालेको भने खासै लामो समय भएको छैन । यसै पनि कुरापन्थीहरुको भीड हो नेपाली चलचित्र क्षेत्र । कथ्य समाज...
एमालेसँग जनताको अपेक्षा
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन चर्चाको शिखरमा छ । एमाले, कम्युनिस्ट पार्टी भएर पनि यसले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक विधिका कारण यस महाधिवेशनले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको हो । कम्युनिस्ट भनेका तानाशाही हुन्, यसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन...
कहिलेसम्म बाँच्नु अत्याचार सहेर…???
मानिस समाज र परिवारका लागि मात्रै हैन, आफ्नो लागि पनि बाँचेको हुन्छ । तर, हाम्रो समाजमा महिलालाई आफ्नो पूर्ण अधिकार पाएर बाँँच्नको लागि पुरुषले हैन, महिलाले नै हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन्। जुन कुराको सुरुवात हुन्छ...
एमाले राष्ट्रिय महाधिवेसन: ओलीले जिते के हुन्छ ?
एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेसनले एमाले अध्यक्ष को हुने भन्ने? प्रश्नको उत्तरमा एमालेलाई मात्र हैन, मुलुक, मुलुकबासी र नेपालका हितैसी विदेसी मित्र राष्ट्र हरुका लागि पनि छनौट दियो, केपी शर्मा ओली वा माधवकुमार नेपाल ।...
फेसबुक हेरेर भाइले कुटाइ खाँदा…
एक दशकअघिसम्म एक कल फोन गर्न घण्टौं धाउनुपथ्र्यो । लाइन बस्नुपथ्र्यो । एउटा चिठ्ठी पठाउन र पाउन महिनौंसम्म हुलाकी कुरेर वस्नुपथ्र्यो । तर, अहिले समय बदलिएको छ । सहर बजारमा मात्रै होइन, गाउँगाउँमा समेत...
एनआरएन: राष्ट्रभक्त साट्ने नेपालीकै ठूलो स्वर ?
राम्रो कुरा नक्कल गर्नु नराम्रो हैन । यस अर्थमा एनआरआई अर्थात नन रेजिडेन्ट इन्डियनको नक्कल गरेर हाम्रा प्रवासी अग्रजहरुले एनआरएन (नन् रेजिडेन्ट नेपाली) भन्ने नामले प्रवासी नेपालीहरुको नयाँ परिचय न्वारन गरिदिए । त्यसपछि, एनआरएन...
ससुराज्यूले जब अमेरिकालाई स्वर्ग भन्न छोडनुभयो…
ससुरा धनबहादुर भटृराईज्यु २००५ को नोभेम्वर महिनामा सासुहित न्युयोर्क घुम्न आउनु भएको थियो नेपालबाट ८३ बर्षको उमेरमा । न्युयोर्कमा आएकै दिनदेखि भन्न थाल्नुभो ज्वाँई अमेरिका त स्वर्ग रहेछ धार्मिक ग्रन्थ र प्रवचनमा सुनेको जस्तै...
किन ज्यानमारा बन्दैछ हृदयाघात ?
रुकुमका ४० वर्षे मानबहादुर पुन राति खाना खाएर सुते । भोलिपल्ट विहान सुतेको ठाउँबाट उनी नउठेपछि साथीहरुले उठाउन खोज्दा उनको मृत्यु भैसकेको रहेछ । पछि थाहा भयो, उनकोे मृत्यु हृदयाघातले भएको रहेछ । यसैगरी...
तामाङ भाषामा सोइनम भन्नाले यात्री भन्ने बुझाउँदो रहेछ । शुरूमा पुस्तकको शिर्षक कस्तो होला भन्ने लागे पनि सोइनम शब्द प्रिय लागेको थियो मलाई । एउटै जिल्लाको भए पनि परिचित थिइन म बिकु लामाजीसंग ।...
अनुभूतिहरूका समीकरण: अविश्वासको तरंग
शब्द विचारको आवाज हो, यथार्थ आवाज उन्नयोन्मुख समाज हो । समाज शब्दको उर्वरभूमि हो । शब्द भानुभक्तको प्रिय राम हो, प्रियको आँसु मोतीराम हो, प्रकृतिको पुजारी लेखनाथ हो, चराको संसार लक्ष्मीप्रसाद हो, अनि आमाको...